Kutheni le nto kufanelekile ukuba ubambe indawo yakho yokunyusa | Martech Zone
Ukulungiselela iminyhadala esiza kuyenza kulo nyaka, i-VP yethu yoPhuhliso lweShishini- umnxibelelanisi omkhulu wenethiwekhi - Umzobi kaHarrison, kwaye bendixoxa ngayo yonke into thina wamzonda malunga neziganeko zonxibelelwano. Phezulu kuluhlu lwaluthengisa nzima kunye neendawo zokunyusa ilifti. Ngamaxesha athile, ndiyaya kwezi ziganeko, kwaye kuvakala ngathi umntu othile ukhalile ibuzzer kwaye wonke umntu uphuma kwikona yakhe ejikelezayo. Bayabhabha kwaye baluka abantu ababekho bebeka omnye komnye bekhangela umdlalo.
Kwaye kunqabile ukuba kufike.
IHarrison ibeke ezinye zezona ziganeko zingalibalekiyo zenethiwekhi kweli lizwe. Endaweni ye- ikhefu ephakamileyo, abazimasa bayakhuthazwa ukuba babelane ngezinto ezenza ukuba iyoyikeka kwimizuzwana engama-30. Ngelixa oko kunokuvakala kuyinto encinci, ibeka abo babekho kuloo ndawo, kwaye kuya kufuneka bembe nzulu ekuboneleleni nge-anecdote yobuqu kwinto abazingomb 'isifuba ngayo, okanye abayikhathaleleyo, okanye abanqwenela ukuba yiyo. Endaweni ye- ukuma, kukukrwaqula kwangoko kwicala lomntu lomntu omi okanye ohleli apho phakathi kwabantu ongabaziyo.
Kwimisitho endiye kuyo, andizange ndihambe ndizama ukukhumbula ukuba lelikabani na ikhadi loshishino. Ndayazi into ephathekayo ngomntu ngamnye engalibalekiyo. Njengomzekelo, ndadibana noDavid Roux. UDavid wayengumdlali wegubu owayethanda ukudlala eCaweni yakhe rhoqo ngeCawa. Ngaphandle kwalonto kuhle uphawu, uDavide waye umqeqeshi wobomi ulutsha. Akuzange kube kudala emva koko ndaqesha uDavid ukuba aqeqeshe eyam intombi.
Zimbalwa iingxaki eziphambili ngeendawo zokunyusa ilifti:
Ingcinga -Kutheni ucinga ukuba umntu ongaphaya kwakho unqwenela ukuphoswa kwaphela?
ukungazi - Uza kuziqonda njani iingxaki ajongene nazo umntu ongaphaya kwakho engazi nto ngazo?
target Uninzi lwexesha ayisiyiyo eyokuya kwinethiwekhi oza kwenza ishishini nayo, ngumntu othungelanayo othunyelwa kuye umyalezo wakho ngelizwi lomlomo.
Oko Umele Ukwabelane ngako
Ukuba ubusazi ukuba umntu ongaphaya kwakho unethungelwano olungaqhelekanga lwabathengi abanokunceda, ungathetha njani nabo ngokwahlukileyo? Awuyi kubabeka, akunjalo? Andiyi. Nantsi into endiza kugxila kuyo:
Kuhle -Ukuthetha nomntu ojikeleze kum nokuqinisekisa ukuba ndibelana nabo ngento engalibalekiyo abangayi kukulibala msinyane. Kum, inokuba ndiyindoda yaseMelika yaseMelika okanye utata ongatshatanga wababini. Baninzi abathengisi kwizixeko ngeedolophu… kodwa azikho ninzi kakhulu iiDewert Shield kunye neeVeterans zaseDesert Storm ezazisebenza kwiTank Landing Ship zaza zakhulisa abantwana abangakholelekiyo bebodwa!
ithemba -Ndifuna ukufunda ukuba ngubani umntu ongapha kwam omnatha kunye no umcebisi othembekileyo ye. Ukuba umntu omi ngaphesheya unonxibelelwano olumangalisayo lwabathengi okanye amaqabane abawacebisayo ngabathengi abafanelekileyo kum, ndifuna ukutyala ixesha elininzi ndibandakanyeka kunye nabo kwaye ndifunda ukuba singabaluleka njani komnye enye.
fundisa -Endaweni yokuphosa umntu kum, ndifuna ukubafundisa endaweni yoko. Ndifuna ukubafundisa ngohlobo lwexabiso endinokuzisa abathengi babo kunye neentlobo zeengxaki esincedisana nazo. Ndifuna ukwabelana ngeemeko zokusebenzisa abazokuzikhumbula kwaye baziphinde nabantu kwinethiwekhi yabo abathembayo.
Buza - Uyakhumbula ukuba unexabiso? Ndifuna ukuqonda ukuba ndinokufezekisa ntoni ukuze ndibenexabiso kulo mntu. Kwaye ndifuna ukucaca ukuba ndiyabacela ukuba bafumane uncedo lokufumana ukufikelela kwinethiwekhi kuba bezilungele iimveliso kunye neenkonzo zenkampani yam.
Abona banxibelelanisi babalaseleyo endisebenza nabo bayayazi imfihlo uninzi olungenayo. Iithagethi zabo ayingabo abantu kumsitho wonxibelelwano… ngabantu ababakho ngaphakathi zabo inethiwekhi eyandisiweyo. Mhlawumbi uzimasa umsitho nabanye abantu abangama-50. Ithemba lakho alikho kuloo ndawo, ngamawaka amathemba ngaphakathi konxibelelwano lomlomo ngomlomo ngaphandle kwaloo ndawo!
tags: UDavid rouxikheshi yomseleumjelo webalaikhefu ephakamileyoUmzobi waseHarrisonwomnathaimicimbi yenethiwekhizokunxibelelanaimicimbi yenethiwekhi